Ny Twitter dia mamela anao hilalao horonantsary YouTube nefa tsy mamela ny fampiharana | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | | Fampiharana iPhone, About us
Nandroso be ny tambajotra sosialy Twitter tato anatin'ny volana vitsivitsy. Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanambara ny lahasa "Super Follow", fitaovana famandrihana hanakaikezana ireo mpampiasa amin'ny atiny manokana sy manokana rehefa mandoa fidirana. Ho fanampin'izany, ny "Spaces", efitrano fandraisam-peo manandrana maka tahaka ny traikefa ClubHouse, dia sedraina, ankoatry ny Fleets, maka tahaka ny tantara Instagram. Dingana iray hafa izao no raisina ary mamela ny famerenana ny horonantsary YouTube tsy mamela ny fampiharana, ankoatry ny fanombohana ny fitsapana hamoahana sy hijerena sary amin'ny kalitao 4K.
Ampidiro sy zahao ny sary 4K: inona no vaovao ao amin'ny app Twitter
Twitter dia nanambara tamin'ny alàlan'ny kaonty ofisialiny tao amin'ny tambajotra sosialiny vaovao momba ny fampiharana ofisialy iOS sy Android. Eo ambanin'ny teny filamatra "ny sary iray dia teny iray alina", singa roa vaovao no natambatra izay hanatsara ny kalitaon'ny atiny multimedia hita amin'ny tambajotra sosialy, ho fanampin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ity karazana atiny ity.
Fitsapana amin'ny Android sy iOS izao: rehefa mi-tweet ny sary tokana ianao, ny fisehoan'ny sary ao amin'ny mpamorona Tweet dia ny fahitana azy eo amin'ny fizotry ny fotoana –– lehibe kokoa sy tsara kokoa. pic.twitter.com/izI5S9VRdX
- Fanohanana Twitter (@TwitterSupport) March 10, 2021
Ny zava-baovao voalohany dia niankina tamin'ny sary izay nakarina tsirairay. Manomboka izao, raha mampakatra sary tokana ianao dia ho lehibe kokoa sy misy kalitao tsara kokoa izany, hoy izy ireo avy amin'ny Twitter. Tsikaritra manokana izany amin'ny sary izay nakarina amin'ny endrika marindrano, fa hahazo fehin-kevitra avo kokoa izy ireo izay hipaka ny efijery iray manontolo, ary hamela bitsika etsy ambony sy ambany. Raha te hiditra amin'ny sary feno dia harahina toy izany ihany ny fizotrany mitovy: amin'ny fipihana eo amin'ny sary.
Ankoatra izany, Fitaovana iray hafa mifandraika amin'ny sary no manomboka andrana. Mety mampakatra ny atiny amin'ny famaritana avo miaraka amin'ny fanapahan-kevitra hatramin'ny 4K. Raha te hahitana raha ampidirina amin'ny beta amin'ity asa ity izahay dia tsy maintsy mandeha any amin'ny Fikirakirana anaty ny fampiharana Twitter izahay ary mamaritra izay toe-javatra ahafahantsika mampakatra na mijery an'io atiny io: Wi-Fi foana na amin'ny Wi-Fi ihany.
Farany fa tsy farany, ny safidy mijery horonantsary Youtube ao anatin'ny fampiharana tsy mila miala amin'ny fizotry ny fotoana. Izy io dia fomba iray handefasana ny traikefan'ny mpampiasa ary hialana amin'ny fandaozana ny rindranasa hidirana amin'ny browser na amin'ny app YouTube.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny Twitter dia mamela anao hilalao horonantsary YouTube nefa tsy miala amin'ny fampiharana